मनोरञ्जन Archives - नेपाल आज
६ विधामा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने तयारीमा रहेकाे फिल्म ‘जालो’को यस्तो छ ट्रेलर
बैशाख १२ । इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली फिल्मले विश्वसामु किर्तिमान कायम गर्दै छ । उक्त किर्तिमान चलचित्र ‘जालो’ ले राख्न लागेको हो । गिनिज बुक अफ् वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने गरि बन्न लागेको उक्त फिल्मका लोभलाग्दा विशेषताहरु छन् । एक सटमा खिचिएको दुई चलचित्र, लामो एक सट चलचित्र, लामो एक सट चलचित्र खिच्ने छायाँकार, लामो […]
बैशाख १२ । केही समयअघि फिल्म ‘रुस्तम’ बाट राष्ट्रिय अवार्ड हात पारेका अभिनेता अक्षय कुमारलाई सामाजिक सञ्जालमा खुब मजाक उडाइयो । त्यसै सन्दर्भमा अक्षयले फेरी पनि मुख खोलेका छन् । एक भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनलाई अवार्डबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘मेरो २५ वर्षको कार्यकालमा जब कसैले अवार्ड जित्छ त्यसलाई केही न केही विवादमा मुछ्ने गरिन्छ । […]
बैशाख १२ । अभिनेता सलमान खान यतिबेला आफ्नी कथित प्रेमीका लुलिया भन्तुरलाई लिएर चर्चामा छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सलमानले अहिले गरिरहेका ‘द दबंग टूर’ का कारण उनीहरु दुईवीच झगडा परेको हो । रिपोर्टकाअनुसार लुलिया ‘द अबंग टूर’ मा गीत गाउन चाहन्थिन् । तर, सलमानले उनलाई गीत गाउन दिएनन् । यस विषयलाई लिएर उनीहरुबीच झगडा […]
बैशाख १२ । बलिउड निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर एकपटक फेरि विवादमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मजाक बनेपछि सधैँ मुख फोडेर जवाफ दिने करणलाई यसपटक पनि ट्वीटरमा समलिंगी भनेर मजाक उडाइयो । करणलाई समलिंगी भनिएपछि उनले पनि मुख खोलेका छन् । एक भारतीय पत्रकार बर्षा दत्तले करण र उनको एक अन्तर्वाता सेयर गरेकी […]
करिनालाई ६ करोडको अफर
वैशाख – ११ । बलिउड अभिनेत्री करिना कपूरलाई एक फिल्मको लागि ६ करोडको अफर मिलेको छ । फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ’को लागि करिनालाई उक्त अफर मिलेको हो । केही समयअघि एक छोराको आमा बनेकी करिना चाँडै नै फिल्ममा देखिदैँ छिन् । फिल्ममा आफूलाई निकै राम्रो भूमिका मिलेको र अलग भूमिका निभाउन पाउँदा आफू निकै खुशी […]
केकीको करियरकै पहिलो हिट फिल्म ‘घामपानी’
बैशाख ११ । फिल्म ‘घामपानी’ ले अनौठौ संयोग पार गरेको छ । संयोग के भने निर्देशक दीपेन्द्र लामाको करियरको पहिलो निर्देशन र नायिका केकी अधिकारीको करियरकै पहिलो हिट फिल्म । अहिलेसम्म दर्जनौ फिल्ममा काम गरिसकेकी केकीको कुनै पनि फिल्मले व्यापारिक रुपमा यति धेरै सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । अभिनयको तारिफ भने उनले चौतर्फी रुपमा […]
यस्तो छ, सधैँ खुसी हुने आलीयाको शुत्र
बैशाख ११ । ‘दुःखलाई गर्नु बाई बाई जिन्दगीलाई भन्नु हाई हाई’ यो आलीया भट्टको जिन्दगीको खुशीको शुत्र बनेको छ । बलिउडमा कम समयमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएकी अभिनेत्री हुन् आलीया । जिन्दगीलाई कसरी सुनिश्चित बनाउने भन्नेबारे आलीयाले आफ्ना अनुभव साटेकी छिन् । फिल्म ‘डियर जिन्दगी’ को वल्र्ड टेलिभिजन प्रिमियरको अवसरमा आलीयाले जिन्दगीमा खुशी हुनेवारे […]
शो छोडेर गएपनि सुनिललाई कपिलको धन्यबाद
बैशाख ११ । चर्चित भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको ‘दी कपिल शर्मा शो’ ले सय हप्ता पूरा गरेको छ । सोही अवसरको खुशीयालीमा कपिलले शोका सम्पूर्णलाई धन्यबाद दिएका छन् । साे अवसरमा शो छाडेर जाने सबै सदस्यलार्इ समेत कपिलले सम्बोधन गरेका थिए । शोका अर्का सदस्य सिद्धुले भने शो छाड्ने कलाकारहरुलाई फिर्ता आउन आग्रह गरे । […]
ज्यानमारा रुख ! हप्तामा लिन्छ एक जनाको ज्यान
वैशाख १० । प्रकृतिको हरियाली सबैलाई प्यारो लाग्छ । अझ गर्मीमा हरियो रुखको छहारीमा बस्न कसलाई मन लाग्दैन र ? तर केही रुख यति खतरनाक हुन्छन, जसको छेउछाउमा पुग्नु पनि मानिसका लागि मृत्युको कारण बन्न सक्छ । सामान्य रुख झै देखिने ‘सरबेरा ओडोलम’ ज्यानमारा रुख मानिन्छ । हेर्दा सुन्दर लाग्ने यो रुखले मानिसलाई स्वाभाविक रुपमा […]
विवादमा सोनम कपुर
वैशाख १० । बलिउड नायिका सोनम कपुर फेरि एक पटक विवादमा मुछिएकी छन् । खरो प्रतिक्रिया दिएर अधिकांश समय विवादमा तानिने सोनम यतिबेला पनि सोसल मिडियो ट्रोलमा छाएकी छन् । उनले लेखेको ट्रोलसम्बनधी लेखेको एक कोलम भारतको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले छापेको थियो । त्यो उनको विचारलाई नै लिएर सोसल साइट युजर्सले सोनमको धज्जी उडाएका छन् […]
बाबु बन्दै कुनाल खेमु
बैशाख ९ । बलिउड अभिनेता कुनाल खेमु बाबु बन्ने भएका छन् । कुनै फिल्ममा नभएर उनी असली जिन्दगीमा बाबु बन्न लागेका हुन् । उनी श्रीमती अभिनेत्री सोहा अली खान गर्भवर्ती भएकी छिन् । अभिनेता सैफ अली खानकी बहिनी सोहाले कुनलसँग लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि सन् २०१५ जनावरी २५ मा विवाह गरेकी थिइन् । कुनल र […]
कर्नाटकमा बाहुबली २ को विरोध, कटाप्पालार्इ ९ वर्ष पुरानाे विवादले माफी माग्न बाध्य बनायाे
बैशाख – ८ । बहुचर्चित फिल्म ‘बाहुबली’ का तमिल अभिनेता सत्यराज(कटप्पा)लाई कन्नडाका स्थानीयले माफी माग्न बाध्य बनाएका छन् । ९ वर्ष पुरानो कावेरी विवादको घटनालाई लिएर भारतको कर्नाटक राज्यको कन्नडाका स्थानीयले कटप्पालाई माफी माग्न बाध्य बनाएका हुन् । कटाप्पाले कावेरी विवादमा कन्नडका स्थानीयहरुको विरोधमा विवादित प्रतिक्रिया दिएका थिए । माफी नमागे ‘बाहुली २’ कन्न्डमा प्रदर्शन […]
युटुबमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरियो ‘सुन साइली’
बैशाख ९ । चर्चित गायक हेमन्त रानाको ‘सुन साइली’ बोलको गीत युटुबमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यतिबेला निकै चर्चित बनेको उक्त गीतमा कालीप्रसाद बास्कोटाले शब्द संगीत भरेका हुन् । गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनेत्री मेनुका प्रधान र गौरभ पहारीको मार्मिक अभिनय रहेको छ । भिडियोको निर्देशन हेमन्त आफैँले गरेका हुन् । वैदेशिक […]
यसकारण सलमानले लगाए जुत्ताको माला
बैशाख ८ । हरेक वर्षमा एउटा फिल्म आउने भएपछि सलमानको फिल्म बहुप्रतिक्षित बन्न थालेको छ । उनको आउँदो फिल्म ‘ट्युबलाइट’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । हरेक फिल्ममा नयाँ नयाँ अवतारमा देखिने र केही नयाँ स्टाइलमा देखिने सलमान फिल्म ‘ट्युबलाइट’ मा पनि नयाँ स्टाइलमा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्मको पोस्टरमा उनले जुत्ताको माला लगाएका […]
करिश्माका पूर्वपतिले न्यूयोर्कमा गरे विवाह
बैशाख ८ । यतिबेला विवाह र डिभोर्स सामान्यजस्तै भइसकेको छ । साधारण मानिसको जीवनमा पनि धेरै यस्ता घटना घट्ने गर्छन् तर, सेलिब्रेटिको जीवनको डिभोर्स र विवाहले भने चर्चा पाउँछन् । यतिबेला बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपूरका पूर्वपतिले तेस्रोे विवाह गरेका समाचारले भारतीय सञ्चारमाध्यममा सनसनी मच्चिएको छ । करिश्माका पूर्वपति सञ्जय कपूरले १३ अप्रिलका दिन लामो समयदेखिकी […]
नयाँ सो लिएर आउँदै सुनिल
बैशाख – ७ । बहुचर्चित कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोभर प्रकरणमा फेरि चर्चा सुरु भएको छ । कपिलसँगको सहकार्यमा कमेडी सो गर्दै आएका सुनिले कपिलसँग झगडापछि अर्कै सो प्रशारण गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यममा चर्चा सुरु भएको हो । केही समयअघि अष्ट्रेलिया टुरबाट फर्किदाँ कपिलले सुनिललाई हातपात गरेपछि सुनिललगायत सोका अन्य सदस्यले द कपिल शर्मा […]
प्रियंका र आयुष्मानको प्रेमसम्बन्धबारे दयाह्याङको यस्तो प्रतिक्रिया
वैशाख – ७ । यतिबेला नेपाली मिडियामा अत्याधिक छाएको प्रसंग हो नायिका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको प्रेमको चर्चा । नायिक कार्की र जोशीको प्रेमसम्बन्धका बारेमा अभिनेता दयाह्याङ राईले मिडियामा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा दुबैजना एकअर्काका लागि प्रफेक्ट भएको बताए । उनीहरुको सम्बन्धले निरन्तरता पाए राम्रो हुने पनि उनले सुझाव […]
चर्चित गायिका मुना थापा मगरको आवाजमा “मौरी घुम्यो फुलको रसैमा“ (भिडियोसहित)
हरेक कलाकार आफ्नो गीत तथा संगीतको चर्चा चुलियोस भन्ने चाहन्छन् । कति कला र गला को माध्यम बाट कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्छन् भने कति त त्यसै हाम फालेका पनि धेरै उदाहरण हरु भेट्न सकिन्छ । तर यहांहरुलाई थाह नै छ होला अकबरी सुनलाई कसि लगाउनु पर्दैन राम्रो कला र गला भएका आवाज र सिर्जनाहरुको […]
किन लाग्यो बिशाललाई मर्ने रहर ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं – ६ । घटनाहरु थरी थरीका छन् । धान खाने मुसो चोट पाउँने भ्यागुतो भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ देख्न पाईन्छ कहिलेकाहीँ । यस्तै घटनामा फसेका छन् बिशाल खरेल । उनकी प्रेमिका आरुसीको हत्या भएपछि उनलाई आपत आई परेको छ । बिशाल जेलको छिंडीमा बर्बराएका छन् । तर, उनको यस्तो बर्बराई साँच्चीकै नभई भर्खरै सार्वजनिक […]
राजेन्द्र खड्गीको खुलासा, ‘रेप सिनले झण्डै घर बिग्रियो’
Posted on: April 19, 2017April 19, 2017Posted by: netra
वैशाख – ६ । चर्चित द्वन्द्व निर्देशक तथा खलपात्र राजेन्द्र खड्गीले रेप सिन (बलात्कारको दृश्य)ले झण्डै घर बिग्रियोको खुलासा गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कुनै समयका चर्चित खलपात्र खड्गी बाबु, राजा, दादा भनेर पनि चिनिन्छ । कुनैबेला ‘हातले मुक्का हानेर राँगो ढाल्छ राजेन्द्र खड्गीले’ भन्ने गरिन्थ्यो । फिल्ममा खलपात्रको अभिनयका क्रममा उनले धेरै पटक […]
ट्रेलरमा हेर्नुहोस् संयम र तक्मेबुढाको ‘रातो घर’
बैशाख – ६ । चलचित्र ‘सायद’ मा सँगै देखिएका नायक संयम पुरी र विलसन विक्रम राई(तक्मेुढा) फेरि सँगै देखिएका छन् । उनीहरुलाई सँगै ल्याउने फिल्म हो ‘रातो घर’ । ‘झखमले’ को भूमिकामा तक्मेबुढा र ‘स्मग्लिङ डन’ को भूमिकामा संयम देखिदैँ छन् । फिल्म ‘सायद’बाट विलसन र संयम दुबैलाई खुब मन पराइएको थियो । तर, विलसन […]
एक हजार करोडको लगातमा ‘महाभारत’काे कथामाथि फिल्म बन्दै
बैशाख – ६ । बेलायती मूलका भारतीय बिजनेसम्यानले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महंगो मोसन फिल्म निर्माण गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । महाभारतको कथामा आधारित रहेर एक हजार करोडको लगातमा फिल्म बन्न लागेको हो । फिल्मको लागि एक करोड रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्ने तयारीमा छ । रिपोर्टअनुसार, ‘महाभारत’लाई एड — फिल्ममेकर श्रकुमार मेननले बनाउनेछन् । फिल्म दुई भागमा […]
अगस्त्यकाे चमत्कारः ११ वर्षकाे उमेरमै १२ कक्षा पास, कसरी सम्भव भयो ?
कसैले १०-११ वर्षको कलिलै उमेरमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको भन्दा सुन्दै अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य हो । भारतको हैदराबादका बालक अगस्त्य जायसवाले ११ वर्षीको कलिलो उमेर १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् भने उनी दिदी नैनाले १० वर्षकै उमेरमा १२ कक्षा पास गरिन् । भखरै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका अश्विनी र भाग्यलक्ष्मीका छोरा […]
आलीयाका बडिगार्ड रक्सीले मात्तिएपछि जागिर चट्
बैशाख ६ । बलिउड अभिनेत्री आलीया भट्टकी आमा सोनी राजदानले आलीयाका एक बडिगार्डलाई जागिरबाट निकालिदिएकी छिन् । सुरक्षाको जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने सुरक्षागार्डले नै रातको ३ बजे रक्सी खाएर बसेको अवस्थामा भेटेपछि आलीयाकी आमाले उनको जागिरबाट निकालिदिएकी हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आलीया आफ्ना कथित प्रेमी सिद्धार्थ मलहोत्राको घर गएकी थिइन् । आलीया जब बान्द्रास्थित सिद्धार्थको घर […]
अक्षयकुमारदेखि अभिषेक बच्चन र सलमानसम्म, विवाह टुटेका यी बलिउड सेलिब्रेटि
सेलिब्रेटिहरुको जीवन सेतो कपडाजस्तै हो । अलिकति दाग लाग्दा पनि प्रष्ट देखिने । बलिउडमा यस्ता धेरै स्टारहरु छन् जसको अफेयर चलेर विवाह हुने पनि कुरा भयो । तर, कारणवश विवाह हुन पाएन । कतिको सम्बन्ध त इन्गजमेन्टसम्म पनि पुग्यो । तर, भाग्यमा जे लेखिएको छ त्यही हुने रहेछ भनेजस्तै उनीहरुको विवाह हुन सकेन । यी […]
वैशाख ६ । नायिकाका कारण निर्माता-निर्देशकबीच शितयुद्ध चर्किएको छ । नगद नारायण कुम्ल्याएर नायिका फरार भएपछि निर्माता, निर्देशकको रुवावासी मात्र मच्चिएको छैन । यही कारण दुई बीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । २ लाख नगद लिएर नायिका फरार भएपछि निर्माता आकाश पल र निर्देशक दीपक बलीबीच बोलचाल नै बन्द भएको खबर आजको जनआस्थाले छापेको […]
यी हुन् बलिउडमा डिप्रेशनको शिकार भएका कलाकार, अमिताभ बच्चन देखी दीपिका पादुकोण सम्म
मानिसको आवश्यकता र इच्छा समयमा पूरा नहुँदा झनै मानिसक तनावमा हुने गर्छन् । हामीले फिल्ममा सधै हासीखुसी देखिरहेका बलिउडका सेलिब्रेटीहरु पनि तनावमा देखिएका छन् । ती को को हुन् ? १. अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा एन्जाइटी डिस अर्डरको सिकार भएकी छन् । यस बारेमा भने खुलेर कुरा गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । उनले यसबाट […]
तमिल सुपरस्टार कमल हसनको घरमा आगलागी, मुस्किल बचे हसन
वैशाख – ५ । तमिल सुपरस्टार कमल हसनको घरमा आगलागी भएको छ । उनको घरमा गत शनिबार आगलागी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आगलागीबाट हसन मुस्किलले बचेको बताइएको छ । घटनापछि उनले ट्वीटबाट आफू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएका थिए । ट्वीटमा हसनले आफ्ना कर्मचारीलाई धन्यवाद दिदै तेस्रो तलाबाट भुईँसम्म पुगन निकै कष्ट भएको जनाएका […]
अनमोलबारे भुवन भन्छन्, ‘मिडियाबाट अनमोललाई मैले लुकाएकै हो’
Posted on: April 18, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चर्चित फिल्म नायक भुवन केसी आफ्ना छोरा अनमोलले अभिनय गर्ने फिल्म ‘कृ’मा यति बेला व्यस्त छन् । कृमा अनमोल केसीले २० लाख रुपैयाँ लिएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने कलाकारका रुपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् । ‘कृ’ को सुटिङ वैशाख ६ देखि हुँदैछ । निर्माण अघि नै चर्चा पाएको ‘कृ’ बारे फिल्मका लगानीकर्ता भुवन […]
कस्तो चलन बिहे भएको तीन दिन सम्म ट्वाइलेट जान नपाउने
Posted on: April 18, 2017April 18, 2017Posted by: Tirtha Khanal
इण्डोनेसिया रहेको एक समुदायमा विवाह भएको तीन दिनसम्म शौचालय जान नपाउने अनौठो प्रथा रहेको छ । टिडन्ग नामक आदिवासी समुदायमा यस्तो विचित्रको परम्परा कायम छ । उक्त समुदायमा बिहे गरेको तिन दिनसम्म बेहुला बेहुलीलाई शौचालय जाने अनुमति दिइँदैन । सुन्दा निकै अनौठो, अप्रिय तथा कष्टकर लाग्दछ । तिन दिनसम्म ट्वाइलेट जान नपाउँदा भर्खर बिहे गरेका […]
कपील र सुनिलको झगडामा बोले कलाकार ऋषी कपुर, दुबै मिलेकै राम्रो
वैशाख ५ । भारतीय कलाकार सुनील ग्रोवर र हास्य कलाकार कपील शर्मा बिच भएको झगडाको बारेमा अभिनेता ऋषी कपुर उनीहरुलाई मिल्नका लागि भनेका छन् । समाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै ऋषीले मिल्नका लागि भनेका हुन् । IPL. There isalook alike of @KapilSharmaK9 in the team of Sun Risers Hyderabad. Anyone finding @WhoSunilGrover in […]
म मेहनती युवती हुँः सोनाक्षी सिन्हा
बैशाख ५ । सोनाक्षी सिन्हाले हालै आफ्ना बारेमा व्यक्त गरेको भनाइ हो यो । त्यसो त उनी बलिउडकी जल्दीबल्दी नायिकामा गनिने भइसकिन् । पुराना अभिनेता शत्रुघ्नकी छोरीको परिचयबाट बलिउड छिरेको छोटो समयमै उनले आफ्नै नामले बाबु चिनाउने हैसियत बनाइसकेकी छन् । त्यसैले पनि यति बेला उनी करिअरको सुखद क्षणबाट गुज्रिरहेकी छन् । अभिनयबाहेक पनि उनी […]
सेन्सरबाट हट्यो रवीनाको फिल्म, १० मिनेट पनि स्कृनिङ्मा टिक्न सकेन
बैशाख ४ । बलिउड अभिनेत्री रविना टण्डन स्टार फिल्म ‘मातृ’ सेन्सर बोर्डको मन जित्नमा असफल रह्यो । बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा बनेको उक्त फिल्म हेर्न सुरु गरिएको १० मिनेटमै सेन्सर बोर्डका सदस्यहरु उठेर निस्किएका थिए । फिल्मको लागि सेन्सर बोर्डका सदस्यहरुसँग स्पेसल स्कृनिङ राखिएको थियो । तर, फिल्म पर्दामा दश मिनेट पनि टिक्न सकेन । […]
कलाकार क्षेत्रीको लागि सहयोग जुट्दै, बेलायतबाट पनि आयो तीन लाख
बैशाख ४ । बिरामी परेका कलाकार दिपक क्षेत्रीको लागि दश विदेशबाट धमाधम सहयोगको लागि रकम उठ्ने क्रम जारी छ । केही समयअघि ओरिकामा रहेका कलाकारहरुले सहयोगको लागि रकम उठाउन सुरु गरिसकेपछि अहिले बेलायतबाट पनि रकम उठेको छ । यूकेमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय तथा क्षेत्री समाज यूकेबाट तीन लाख रुपैँया रकम उठेको छ । क्षेत्री […]
सुवासको हाई भोल्टेजमा को–को नाचे यसरी ?
Posted on: April 16, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
बैशाख– ३ । गायक सुवास चाम्लिङको एल्बम हाई भोल्टेज गीतको म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । बसन्त सापकोटाको संगीतमा बनेको ‘तिम्रो माया हाई भोल्टेज करेन्ट’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो पोखरामा छायाङ्कन गरिएको छ । रिबेल क्रिएसनको प्रस्तुती रहेको गीतको म्युजिक एरेन्ज किरण तुलाधरले गरेका हुन् । उक्त गीतमा पोखराका मोडलहरू मिलन र सृजनाले अभिनय गरेका […]
अत्याधिक पोर्न फिल्म हेर्नाले सम्बन्ध विच्छेद दोब्बर
अत्याधिक पोर्न फिल्म हेर्नु मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैँन । तर यसले मानिसको सामाजिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्छ भन्ने सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्ला । विवाहितहरुले पोर्न हेर्न थालेपछि सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना दोब्बर हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। विवाहित व्यक्तिहरुले पोर्न हेर्न थालेपछिको वर्षहरुमा नहेर्नेको तुलनामा सम्बन्धविच्छेद हुने सम्भावना दोब्बर हुने अमेरिकामा गत वर्ष गरिएको […]
बिचरी वर्षाः जता पनि ठक्करै ठक्कर
वैशाख–३ । त्यसो त हिरोइन वर्षा सिवाकोटीको चुरीफुरी कुनै स्थापित हिरोइनको भनदा कम छैन । सम्झौता गरिसकेको फिल्म अन्तिम समयमा छोडिदिन्छन् । जबकि न उनले कुनै फिल्ममा मुख्य भूमिका पाएकी छन्, न सहायक भूमिकाबाटै प्रशंसा पाएकी छन् । नपत्याए ‘नाइ नभन्नु ल ४’, ‘पशुपतिप्रसाद’, अनि ‘सुब्बासाब’ हेरे पुग्छ । र, यहि लहरमा थपिएको छ, ‘लप्पन–छप्पन’ […]
‘लगान’ की यी विदेशी अभिनेत्री अहिले पनि जस्ताको तस्तै (फाेटाेफिचर)
Posted on: April 15, 2017April 15, 2017Posted by: netra
बैशाख – २ । बेलायती अभिनेत्री तथा मोडल राचल सेल्लीले बलिउड चलचित्र ‘लगान’ मा गरेको अभिनयबाट खुब तारिफ तथा प्रशंशा पाइन् ।उक्त फिल्ममा उनले एलिजाबेथ रुसेलको भूमिका निभाएकी थिइन् । आमीर खान अभिनित फिल्म ‘लगान’ प्रदर्शन भएको अहिले सोह्र वर्ष भइसक्यो तर यी अभिनेत्री भने सदावहार देखिन्छिन् । सन् १९६९ अगस्ट २५ मा जन्मिएकी सेल्ली […]
यस्तो आयो ‘सायद २’ को ट्रेलर
वैशाख-२ । प्रतिक्षित फिल्म ‘सायद २’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । करिब पाँच वर्षअघि रिलिज भएको फिल्म ‘सायद’ को सिक्वेललाई हाइलाइट्स नेपालले सार्वजनिक गरेको हो । फिल्मको कथा र निर्देशन दुवै पुष्पराज नेपालको रहेको छ । फिल्ममा सुशील श्रेष्ठ, स्यारोन श्रेष्ठ, अमृत ढुंगाना, कुशल पाण्डे, सुनील रावल, सुशील सिटौला, निशा कार्की, रुबिना श्रेष्ठ, बुद्धिलाल […]